“Tsy momba ny tolona ihany i Sarayaku, fa manana ny fahasamihafana ao anatiny ihany koa izy” · Global Voices teny Malagasy
“Tsy momba ny tolona ihany i Sarayaku, fa manana ny fahasamihafana ao anatiny ihany koa izy”
Voadika ny 04 Jona 2018 4:48 GMT
Ny Tetikasa Reframed Stories dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka ny vondrom-piarahamonina misy azy. Ireny tantara ireny dia eritreritry ny olona izay matetika misolo tena ny hafa. Noforonina ny sehatra Media Cloud, fitaovana fanadihadiana lahatahiry izay manadihady angona fampahalalam-baovao amin'ny fotoana iray manokana, ka ahafahan'ny mpandray anjara mandinika sy mifanakalo hevitra momba ny fijery voalohany amin'izay anehoana azy ireo ao amin'ny fampitam-baovao. Mitandrina tsara ny tetikasa mba tsy hanao fanambarana maimaika momba ny lahatahiry, fa io no fiaingana miteraka sehatra hifanakalozan-kevitra amin'izay azon-dry zareo atao hamolavolana ny fampitam-baovaon-dry zareo manokana amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Ronny Avilés dia mpikambana ao amin'ny Vahoakan'i Kichwa an'i Sarayaku ao amin'ny Faritra Amazoniana ao Ekoadaoro, ary nitolona hatry ny ela teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena mba hampitsahatra ny tetikasa fitrandrahana ao amin'ny faritanin'izy ireo. Ity manaraka ity dia dikantsoratra tamin'ny lahatsarin'ny fanehoan-kevitr'i Ronny momba ny zavon-teny amin'ny voambolana “Kawsak Sacha,” (Ala Velona) izay fomba fiainana mba hiara-hiaina amin'ny tontolo voajanahary.
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra 5 nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 ka hatramin'ny Aprily 2018 hita nanonona ny “Kawsak Sacha” (Ala Velona) tao anatin'ny angona Media Cloud 3 amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo amin'ny sary lehibe kokoa)
Nisafidy ny zavon-teny ho an'ny voambolana Kawsak Sacha (Ala Velona) aho. Tsy momba ny tolona ihany i Sarayaku, fa manana zava-maro tahaka ny zava-maniry, ny biby sy ny fanahy miaro anay izay monina any anaty farihy lehibe, renirano, tendrombohitra sy ny hazo ihany koa izy. Izany no ananan'i Sarayaku, ary izany no tianay hipoitra ao anatin'izany zavon-teny izany.
Izy ity dia ao anatin'ny andiana Rising Frames norafetina tao anatin'ny atrikasa nokarakarain'ny Departemantan'ny Fifandraisan'i Sarayaku tamin'ny 17 Mey 2018 ity izay nampitambatra ireo tanora ao amin'ny vondrom-piarahamonina mba hanadihady ny fomba isehoan-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoriana. Taorian'ny fifanakalozankevitra, namorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany izy ireo. Iray amin'ireo mpandrindra ny atrikasa i José Santí, izay nandray anjara voalohany indrindra tamin'ny Tetikasa Reframed Stories ary efa nanoratra ny fomba tantarany manokana amin'ny fanehoana an'i Sarayaku.
Belén Febres-Cordero dia nanampy tamin'ny fanitsiana ny fandikan-teny tamin'ny lahatsoratra, ary nasiam-panovana mba hazava kokoa sy fohy kokoa.
Rosia 11 ora izay
Azia Atsimo 15 ora izay
Antsafa 20 ora izay